IBlaq Diamond iwine indondo eNigeria
I-BLAQ Diamond iwine indondo ye-Afrima eNigeria Isithombe: INSTAGRAM
IQEMBU lomculo laseMnambithi, iBlaq Diamond, limangaze abaningi liwina indondo emiklomelweni ama-All Africa Music Awards (AFRIMA) eNigeria, ngeSonto ebusuku, lehlula abaningi abebeyibanga nabo le ndondo.
IBlaq Diamond, ebunjwe nguNdumiso "Ndu Browns" Mdletshe noSiphelele "Danya Devs" Dunywa, ithole indondo yeBest Male Southern Africa.
Ibiqhathwe nabanye abaculi bakuleli nakwamanye amazwe okubalwa kubo uCassper Nyovest, Nasty C, Sun-El Musician, Mi Casa, Jah Prayzah (Zimbabwe), Focalistic nabanye.
Ibiqokwe nasemunxeni we-Artist of the Year. Abaculi bakuleli abawinile kule miklomelo uhlelo lwayo obeluphethwe nguPearl Thusi no-Eddie Kadi, kubalwa kubo uBlack Coffee, Makhadzi, Zanda Zakuza, Busiswa, Kamo Mphela, DJ Zinhle, Kelly Khumalo nabanye.
UMakhadzi uthole indondo yeBest Artist Duro or Group Electro.
UMAKHADZI nomklomelo awuthole kuma-Afrima Isithombe: TWITTER
"Siyabonga eNingizimu Afrika, abalandeli bethu nabo bonke abasivotele," kusho uNdu ngamafuphi esiteji.
Imizamo yokumthola izolo igcine iphunzile njengoba usesaseNigeria.
Leli qembu liqophe umlando kumaSouth African Music Awards maphakathi nonyaka likhala lemuka nendondo ye-Artist of the Year nobekungokokuqala lo munxa, owawuvotelwa ngabantu, ukhona.
Umgcinimafa weKZN Creative Industry Forum, uDJ Sox, ulihalalisele wathi yenza umculo wakulesi sifundazwe ugqame nakwamanye amazwe.
"Yinto esiyijabulelayo lena ngoba yenza umculo wethu ungene emazweni ase-Afrika nangaphandle. Sizizwa simelelekile siyiKZN neNingizimu Afrika jikelele. Bayigqamise ngendlela encomekayo iKZN futhi siyathemba nabasakhula bazofunda kubo," kusho uDJ Sox.